Freshchat: Midaysan, luuqado badan, Wadahadal isku dhafan iyo Chatbot loogu talagalay boggaaga | Martech Zone
Freshchat: Midaysan, luuqado badan, Wadahadal isku dhafan iyo Chatbot loogu talagalay bartaada
Arbacada, Oktoobar 7, 2020 Arbacada, Oktoobar 7, 2020 Douglas Karr
Haddii aad gaari wadid waxay horseed u tahay bartaada, inaad wax la adeegato, ama aad siiso taageerada macaamiisha irs ayaga ayaa filaya maalmahan in degel kasta uu leeyahay karti wada hadal isku dhafan. In kasta oo taasi u muuqato mid fudud, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo isku murugsan oo ku saabsan sheekada… laga bilaabo maareynta wadahadalka, u dulqaadashada spam, ka jawaab celinta otomaatiga, dariiqa… waxay noqon kartaa madax xanuun.
Inta badan aaladaha lagu sheekaystaa waa wax iska fudud… kaliya war-bixin dhexmarta kooxdaada taageerada iyo booqdaha bartaada. Taasi waxay ka tagaysaa farqi weyn iyo fursad macaamiishaada khibradeeda iyo sidoo kale awoodaada ganacsi 'si ay ula socdaan una caawiyaan martida. Freshchat waa xal adag oo caalami ah oo lagu wada hadlo oo bixiya tan oo ah astaamo iyo isku-dhafid.
Freshchat: Xalka Fariinta Heerkasta oo Safarka Macaamiisha ah
Ka faa'iideyso debecsanaanta, dhammaadka-dhamaadka, madal ganacsi oo ay ku shaqeyso AI si loo mideeyo khibradaha macaamiisha, kor loogu qaado wax soo saarka shaqaalaha loona xoojiyo nidaamka deegaanka iyo horumariyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha. Qiyaasta awoodda barnaamijka Freshworks.
Jiilka Lead - la xiriir martida ka hor inta aysan ka bixin goobtaada adoo isticmaalaya bots iyo ololeyaal. Iska yaree sicirka boodka oo kobciya booqdayaasha iyagoo leh ujeedo hoose oo ay wax ku iibsadaan.
taageero Customer - Taageerida iyo sii haysashada macaamiisha, iyagoo gaarsiinaya qanacsanaanta miisaanka. Kiciyaan jawaabaha otomaatiga ah, qabashada sheekooyinka, oo qiimee jawaabta kooxdaada taageerada.
Hawlgelinta macaamiisha - furitaanka kobaca adigoo u rogaya martida macaamiil firfircoon. Ku dhawaaq dalabyo gaar ah ama fariimo ku saleysan dhacdooyinka.
Astaamaha Freshchat Ku dar
Fahanka Ololaha - Cabir Hagaaji Ku celi Hel aragtida cabirrada sida la arkay, la soo diray, iyo heerka jawaabta.
Channels - Marka lagu daro bartaada internetka, Freshchat waa barxad mideysan oo la jaanqaadi karta xisaabaadkaaga ganacsi ee Slack, WhatsApp, Apple Business Chat, Line, Facebook Messenger, iyo Mobile Apps.
Wada hadalada - Inaad si buuxda gacanta ugu hayso waxa aad weydiinayso iyo sidaad wax ugu weyddiin lahayd qulqulka shaqada bot ee loo habeeyay. U oggolow bots inay ku soo wareejiyaan booqdaha kooxdaada marka martidu muujiso aqoonsi taban oo u baahan taabashada aadanaha.
Isdhaxgalka Clearbit - Ku beddel foomamka Is-dhexgalka ClearBit. Shakhsiyeelo farriimaha ku saleysan cabbirka shirkadda booqdaha, warshadaha, iyo waxqabadka ku saabsan astaamaha bulshada.
Isku-xidhka Browsing - La soco isla bogga isticmaaleyaashaada - U hag iyaga meel fog adoo galaya shaashaddooda oo la hadlaya.
Bartilmaameedka Caadiga ah - Bartilmaameedka booqdayaasha iyaddoo ku saleysan xaaladaha caadiga ah ama aad tallaabo hore u sii qaadatid oo aad sameysato mid kuu gaar ah.
email Notifications - Wadahadal xitaa ka dib marka ay sunta rasaastu ka dhacdo websaydhkaaga oo leh ogeysiisyo emayl ah.
Enterprise - xalka farriinta heerka ganacsiga si si fudud kor loogu qaado taageeradaada iyadoo wali la ilaalinayo kaqeybgalka macaamiisha shaqsi ahaan iyo dadaal la'aan.
Jadwalka Dhacdooyinka - Ka hel taariikhda buuxda ee booqdaha booqdahaaga bartaada bilaha, maalmaha, iyo waqtiyada maalinta.
Fahanka Caawinta Hesho dhammaan aragtida aad u baahan tahay si aad ugu gudbiso qanacsanaanta macaamilka dashboard-ka waqtiga dhabta ah, khad-caawiyaha, iyo warbixinta xubinta kooxda.
In-Messenger Su'aalaha La Weydiiyo - U oggolow booqdayaashu in ay xalka ka helaan gudaha Webka Rasuulka adoo adeegsanaya baarka raadinta si ay u raadiyaan Su'aalaha. Raadin xoog leh ayaa xaqiijineysa in isticmaaleyaashu aysan marin dhibco badan si ay jawaabo u helaan.
IntelliAssign - Wadahadalka wadada ee ku saleysan heerarka xirfadeed ee xubnaha kooxdaada - bilow, dhexdhexaad, ama khabiir. Ama marin iyo fariimo u dir wakiilada iyada oo ku saleysan sharciyada horay loo sii qeexay, miirayaasha, iyo ereyada muhiimka ah.
Messenger-ka oo luuqado badan ku hadla - Erayada saxda ah ayaa sameeya ama jabiya ciyaarta. Habee waxa wariyahaagu sheego oo ka xulo 33+ luqadood
OmniChat - Samee jiilka hogaaminta meelkasta oo ay joogaan chrome kordhinta.
Aqoonsiga Muhiimka ah - Dusha saar dulucda sheekooyinka ugu muhiimsan. Sifee fariimaha ku saleysan waqtiga jawaabta.
Warbaahinta hodanka ah - Jawaabaha qoraalka oo ay weheliyaan, waxaad ku dari kartaa fiidiyowyo, sawirro, emojis, istikaarro, ama PDF iyo dukumintiyada jawaabahaaga otomaatiga ah iyo kuwa gacanta lagu qaato.
SmartPlugs - Ka soo qaado xogta barnaamijyada dibedda sida CRM ama qalabka otomatiga ee suuqgeynta ama ku riix xogta barnaamijyadan si loogu daro macnaha guud ee hoggaanka. Isdhexgalka waxaa ka mid ah codsiyada socodka shaqada, CRM, iibka & suuqgeynta suuqgeynta, fiidiyowga, taleefanka, E-commerce, la socodka arrinta, otomatiga suuqgeynta, nidaamyada lacag bixinta, xisaabinta, iyo nidaamyada lacag bixinta.
Fursadaha Kicin - Kicinta in kabadan hal jeer si loo xoojiyo ama hal mar oo kaliya in ay noqoto mid aan spammy ahayn. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaadan kicinin wixii ka baxsan saacadaha shaqada kooxdaada iyo / marka kooxdaada ay dhexda ugu jirto wadahadalka martida.
Tours Product Freshchat Isu Soo Bixin Bilaash
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Freshchat.
Tags: wada hadalka ganacsiga tufaaxarobotisku dar ahchatchatbotgarasho yaqaanisdhexgalka crmfacebook facebookcusubFreshdesksuuq cusubSareogaalsheeko luqado badancrm jilicsanomnistar gacan saarpagatoPipedrivedhuumaalaysiga crmsdksheekoXpresskarbaashkor u qaadidbogga botwada sheekaysiga boggaWhatsAppZoho
Caqabadaha & Fursadaha Ganacsi ee Faafida COVID-19
JustControl.it: Aaladda ototatiga Xogta Uruurinta Kanaallada oo dhan